उत्तम स्लट गाइड र रणनीति - Gambling Papa
1 स्लट के हो?
2 स्लटहरू कसरी खेल्ने?
3 कसरी वास्तविक पैसाको लागि अनलाइन स्लटहरू खेल्ने?
4 शुरुआतीहरूको लागि स्लट गाइड
5 स्लटमा कसरी जित्ने?
6 स्लट सल्लाह र युक्तिहरू
7 कसरी अनलाइन स्लटहरू धोखा दिने?
8 कसरी स्लट मेसिन धोका दिने?
लस भेगासको त्यस्तो आइकनिक अरू के हुन सक्छ जुन केवल स्लट मेसिनको रूपमा? यदि तपाईंले हामीलाई सोध्नुभयो भने, हामी केहि सोच्न सक्दैनौं। निस्सन्देह, हामी मानौं कि तपाईं हाम्रो दिमागमा ब्ल्याकजेकको सोचलाई सप्लान्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, यस्तो देखिन्छ कि यो हाम्रो दृष्टिकोणबाट एक निष्फल प्रयास हो। अन्त्यमा, स्लट मेसिनहरू जूवाको संसारको कुरो हो। अरू केही जग्गा जमिन बेच्न आउँदा सम्म, संसार भर बाट मानिसहरू रील मा बस्न को मौका को लागी हल्ला मा जारी रहनेछ।
स्लट के हो?
ती व्यक्ति जो लास भेगासमा व्यक्तिगत रूपमा हेर्नको लागि मौका पाएका छैनन् तिनीहरूले विगतमा यस्तो केही देखेका छैनन्। अझै, यसको मतलब यो केवल आधुनिक आविष्कार हुन् भन्ने होइन।
वास्तवमा, हाम्रो उत्कृष्ट ज्ञानका अनुसार, यस्तो देखिन्छ कि पहिलो दृश्यहरू न्यूयोर्कमा बनेका थिए।
१०० बर्ष भन्दा पहिले, स्लट मेसिनहरू बिग एप्पलको बीचमा आम जनतालाई जीवन्त बनाउँदै थिए। यी चीजहरू तुलनात्मक रूपमा प्राचीन भए पनि, हाम्रो आधुनिक दिमाग उनीहरू द्वारा मोहित भइरहन्छ।
स्लट मेशिनहरूको लामो र storied ईतिहास छ:
पहिलो स्लट मेसिन, जुन हामीले पहिचान गर्छौं, न्यू योर्क शहरमा १ 18 90 ० को दशकको अन्ततिर स्थापना गरियो। त्यस समयमा यो अधिवेशनको साथ एक अनुपम चुभन थियो।
त्यस समयका मानिसहरूले त्यस्तो जटिलता कहिल्यै देखेका थिएनन्, त्यसैले यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि तिनीहरूले यती धेरै समय यस उपकरणमा छक्क पार्दछ।
अधिकांश प्रकारका क्यासिनोमा खेलको मानक प्रकार भेटियो:
आजकल, यी मेशिनहरू लगभग सर्वव्यापी छन्। विश्वभरका क्यासिनोहरूमा, खेलाडीहरूले हलहरू पign्क्तिबद्ध गर्छन् किनकि उनीहरू यी आश्चर्यजनक उपकरणहरूको रिलहरू स्पिन गर्छन्। यद्यपि आधुनिक संसारमा यति धेरै सामान्य छन्, तर यस्तो लाग्छ कि विगत सय बर्षमा केही परिवर्तन भएको छैन। हामीले लिने ठाउँको बिन्दुबाट, भविष्य हेर्दैन जस्तो स्लट मेसिनहरूको ’boutमा केही पनि परिवर्तन गर्न सेट गरिएको छ।
धेरै जसो अनलाइन समुदायहरूमा लोकप्रिय छन्:
हाम्रो पहिलेको रायको विपरित, अनलाइन स्लट मेसिनहरूले आश्चर्यजनक गतिमा लोकप्रियता प्राप्त गर्दैछन्। घरमा, जब तपाईं डाटामा हेर्नुहुन्छ, परम्परागत क्यासिनोहरू तुलनामा मर्दैछन्। अवश्य पनि कसैले पनि व्यक्तिगत अनुभवलाई कुनै पनि समय चाँडै नै लोप हुने आशा गर्दैन। अझै, हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि ती प्रवृत्तिहरू झन्‌ झन्‌ स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ।
स्लटहरू कसरी खेल्ने?
तिनीहरूको कोरमा, यी मेशिनहरू तथ्या and्क र सम्भाव्यता वरिपरिको बनाइएको छ। त्यसकारण जहाँसम्म रणनीतिहरूको सवाल छ, तपाईं बरु सीमित हुनुहुनेछ कुन विकल्पहरू तपाईं पछ्याउन सक्नुहुन्छ। भाग्यवस, स्लटहरू जुवा खेल्नको लागि सजिलो खेलहरू हुन्। चाहे यो अनलाइन हो वा व्यक्तिमा, यसले लामो समय लिन सक्दैन जबसम्म तपाईं आफू एक पेशेवर भएको जस्तो महसुस गर्नुहुन्न।
मेशिनमा निर्भर गर्दै, नियमहरूमा केही भिन्नताहरू अवस्थित हुन सक्छ:
तपाईंले खुशीको साथ पागल हुन थाल्नु अघि, तपाईं विशेष नियमहरूको लागि मूल्यांकन गर्न केही क्षण लिन सक्नुहुनेछ। केहि अवसरहरूमा, मेशिनहरू एक आपसमा सानो फरक हुनेछ। समग्रमा, तिनीहरू खेलको समान नियमहरू पालना गर्दछन्। अझै पनि, नियमहरूमा सानो फरक भनेको तपाईंको पकेटबुकमा महत्त्वपूर्ण दाँतको अर्थ हुन सक्छ यो सबै भनिसकेपछि र काम सकिए पछि।
सामान्यतया, तपाईको एक मात्र विकल्प तपाईले कुन मेशिन खेल्नुहुन्छ भनेर हुनेछ:
मेशिनहरू तथ्या .्क मार्फत कार्य गर्ने भएकोले, तपाईं घाटामा पर्नुहुनेछ यदि तपाईंले तिनीहरूको प्रोसेसरहरूलाई सोच्न प्रयास गर्नुभयो भने। त्यसबेला, चीता भन्दा बढि प्रयास गर्नु अझ प्रभावकारी हुनेछ। यसैले, तपाईं चरम चयनता प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ जब तपाईं कुन मेसिन खेल्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। यी केवल निर्णयहरू हुनेछन् जुन तपाईं रातीभरि नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ।
धेरै जसो भागमा, वास्तविकतालाई उपेक्षा गरी बाधा उत्पन्न गर्ने रणनीतिहरू:
यसैले, यदि तपाईले अरुबाट केहि भन्नु भयो भने तपाईले कुनै कुरा पढ्नु भयो भने तपाईले कुनै श dis्का बिना यसलाई उपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यो तथ्या man्क हेरफेर गर्न को लागी असंभव भएकोले तपाईले पर्खनु पर्छ र परिणामहरू कसरी खेल्छन् हेर्नुहोस्।
कसरी वास्तविक पैसाको लागि अनलाइन स्लटहरू खेल्ने?
ईन्टरनेट को लागी धन्यवाद, लाखौं जुवा खेलाडीहरु हरेक दिन अनलाइन स्लट खेल्छन्। यदि तपाईं यस्तो केहि रुचि हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं प्रयोग गर्न लाखौं वेबसाइटहरू उपलब्ध पाउन चाहानुहुन्छ। जब तपाइँ उनीहरूलाई कसरी खेल्ने भनेर सिक्नुभयो, तिनीहरूले अरू कुनै मन पराउँदैनन्।
गेमि commission आयोग मार्फत सक्रिय इजाजतपत्र भित्र कतै खोजी गर्नुहोस्:
खेल्न सुरु गर्न, तपाईंले एक प्रतिष्ठित संस्था खोज्नुपर्नेछ। सावधानीको एक शब्दको रूपमा, हामी फेला परेको पहिलो साइटमा रेजिष्टर गर्ने विरूद्ध सुझाव दिन्छौं। यद्यपि यो असम्भव छ, स्क्यामरहरू सम्भावित ग्राहकहरुलाई ठग्ने प्रयासमा साइटहरू दर्ता गर्न प्रख्यात छन्। त्यसकारण, जबसम्म तपाइँ गेमि commission आयोगको साथ तिनीहरूको लाइसेन्स प्रमाणित गर्नुहुन्न, पैसा खर्च गर्नका लागि बढी प्रतिष्ठित ठाउँ खोजी गर्नु राम्रो हुन्छ।
खाताहरू दर्ता गर्नुहोस् जुन उनीहरूले प्रदान गर्ने विधिहरू प्रयोग गरेर:
पर्याप्त लिस्टिंग perused पछि, तपाईं वैध स्लट को साथ एक ठाउँमा आउनु हुनेछ। त्यसो भए, तपाईले तिनीहरूको पञ्जीकरण प्रक्रियाको साथ अनुसरण गर्नुपर्नेछ। सामान्यतया, जोसँग गुगल खाताहरू छन् उनीहरूले एक्सचेन्जको यस बिन्दुलाई द्रुत-ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्। अर्को तर्फ, कुनै अनलाइन खाता बिना तिनीहरूको लागि, एक ईमेल ठेगाना धेरै जसो पर्याप्त हुनुपर्छ।
त्यस पछि, तिनीहरूको वेबसाइटमा तपाईंको वालेटमा पैसा जम्मा गर्नुहोस्:
अब, एकचोटी यो काम सकिसकेपछि, तपाईंसँग वेबसाइटमा पूर्ण रूपमा कार्यरत वालेटमा पहुँच हुनेछ। अर्को, पैसा तपाईंले वालेटमा जम्मा गर्नु पर्छ तपाईंले केही अरू गर्न अघि। त्यसो गर्न, सहि तरीका साइटमा निर्भर हुन सक्छ। त्यस कारणका लागि, हामी सुझाव दिन्छौं जुन तिनीहरू आफ्नो पृष्ठमा उपलब्ध छन् सबै गाईडहरू प्रयोग गर्न। यस तरिकाले, तपाईं गल्ती गर्न सक्नुहुनेछ जब पैसा जम्मा हुन्छ।
तब, उनीहरूको सुची बनाउनुहोस् जब सम्म तपाईं केहि उपयुक्त देख्नुहुन्न:
सामान्य रूपमा भन्नु पर्दा, यो खातामा पैसा जम्मा गर्नको लागि लामो समय लिनुहुँदैन। तपाईले वालेटमा नगद देख्ने बित्तिकै स्लट मेसिनहरूले तपाइँले तिनीहरूलाई प्रस्ताव गर्नुहुने कुनै पनि कुरा स्वीकार्नेछ। त्यसोभए, किन तपाईंसँग यो छैन?
शुरुआतीहरूको लागि स्लट गाइड
अवश्य पनि, त्यहाँ केहि वास्तविक कारणहरू छन् मानिसहरू खेल्नको लागि पहिले हिचकिचाउन सक्छन्। यदि, एकातिर, तपाईंले पहिल्यै यी मध्ये केही खेल्नुभयो भने, यो यस पटक डरलाग्दो हुने छैन। यद्यपि सबैलाई त्यस्तो अनुभव हुँदैन। यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये एक हुनहुन्छ जो उनीहरूको पहिलो पटक खेल्ने ’boutमा चिन्तित छन्, हामीले दिमागमा उत्तम समाधान पाएका छौं। निम्न गाईडका साथ तपाई आफ्नो क्षमता र अनुग्रह दुबैको साथ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ। यद्यपि केवल अन्य प्रतिस्पर्धी कम्प्युटर हो, तपाईं परिणामको पर्वाह नगरी खुसी हुनुहुनेछ।
एकचोटि तपाईंले एउटा मेशीन फेला पार्नुभयो, काम मात्र सुरू भयो:
एक पटक तपाईं स्थापनामा प्रवेश गर्नुभयो, तपाईंले आफ्नो आँखालाई मुक्कामा राख्नु भयो। जबसम्म तपाईले सबै चीज गुमाउनु परेन, तपाईको छनौटको साथ छनौट हुनु उत्तम हुन्छ। सबै विकल्पहरूको मूल्या to्कन गर्न समय लिई, तातो स्ट्र्याकमा मेशिनहरू हेर्न सजिलो हुनेछ। जब तपाइँ तपाइँको लक्ष्य को लागी पहिचान गर्नुहुन्छ, शीघ्रता संग यो मा pounce। अन्यथा, तपाइँ कहिले पक्का हुन सक्नुहुन्न कि यदि अर्को खेलाडीको आँखा उही लक्ष्यमा राखिएको छ भने।
प्रत्येक मेशीनका लागि निर्देशनहरू अचम्मका विवरणहरूमा पढ्नुहोस्:
खेल्नु अघि, तपाई प्रत्येक मेसिनको लागि निर्देशनहरू जाँच गर्न चाहानुहुन्छ। केही उदाहरणहरूमा, यद्यपि मेशिनहरू यस्तै देखिन्छन्, नियमहरू तपाईंको रातलाई बर्बाद गर्नको लागि भिन्न छन्। यदि तपाईंले अधिक लाभदायक स्पिनको आशा गर्नुभएको थियो भने, कसैले निराश महसुस गरेकोमा तपाईंलाई दोष दिएन। यस्तो अप्ठ्यारो क्षणबाट बच्नको लागि, तपाईं क्यासिनोमा प्रत्येक मेशिनहरूको सेटहरूको नियमहरूको पूर्ण विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ।
तब, तपाईंको पेटको अन्तर्ज्ञान अनुसार रीलहरू स्पिन गर्न सुरू गर्नुहोस्:
अन्तमा, पूर्ण रूपमा सूचित, तपाईं आफ्नो हृदयको इच्छा खेल्न सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ। सामान्यतया, समस्याहरू कसरी खेल्ने भनेर पत्ता लगाउन यो सबै गाह्रो छैन। धेरै जसो समय, त्यहाँ एक लीभर छ, जुन तपाईं खेल सुरू गर्न तान्न सक्नुहुनेछ। केहि अवसरहरूमा तपाईले स्पष्ट पत्रबिना मेसिनहरू भेट्टाउनुहुनेछ। ती उदाहरणहरूमा, हामी यसको सट्टा एक बटन खोजीको लागि सुझाव दिन्छौं। अधिक आधुनिक मेशिनहरू यसको ठाउँमा एक साधारण बटनको पक्षमा लीभरको साथ टाढा गर्छन।
तपाईंको शर्तको आकार समायोजित गर्नुहोस् जब तपाईं साथ जानुहुन्छ:
केहि पनि गर्नु भन्दा पहिले केहि समय मेशीन स्पिन। जब तपाई चीजहरूका ह्या hang्ग पाउनु हुन्छ, ध्यान दिनुहोस् ध्यान दिनुहोस् कति भुक्तानी फरक हुन्छ यदि तपाईं आफ्नो शर्तको आकार समायोजित गर्नुहुन्छ भने। केही मेशिनहरूको साथ, तपाईं प्रत्येक स्पिन अघि लाइनमा थोरै बढी राखेर तपाईंको जीतलाई ठूलो वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण, खेल खेल्नको लागि छनौट बाहेक, सही शर्त आकार निर्धारण ज्याकपट बढाउनको लागि तपाईंको उत्तम विकल्पको ’boutमा हो।
स्लटमा कसरी जित्ने?
जबकि कालोज्याक अधिक मानवीय स्तरमा कार्य गर्दछ, स्लट मेसिनहरू पूर्ण रूपमा उनीहरूको कोरमा विद्युतीय हुन्छन्। फलस्वरूप, सबै भन्दा निडर जुवा खेलाडीहरूका लागि पनि प्रभावकारी रणनीति विकास गर्न धेरै नै गाह्रो छ। अधिकमा, तपाईले अरूलाई घाटा लिने प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले अन्यथा लिनुभएको हो। परवाह नगर्नेहरूलाई तिनीहरूको वालेटहरू हराउन दिएर, तपाईं अन्तमा प्राय: प्रायः यही नै भाग्यबाट टाढा रहनुहुनेछ।
यदि तपाई व्यक्तिगत रुपमा जानुभयो भने, तपाईको नहुनु भन्दा बढि लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ:
तथ्याical्कनिक शुद्धतामा उनीहरूको निर्भरतालाई धन्यवाद, एक अनलाइन स्लट मेसिन खेल्ने प्रयास गर्नु नै निराशाको व्यायाम हो। जब तपाईं एक व्यक्तिगत क्यासिनोमा जानुहुन्छ, तपाईको गणना गर्न चीजहरू धेरै सजिलो भएको थियो। यस्तो क्यासिनोमा, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि टाढाबाट कहिँबाट कसले मेसिन खेलिरहेको छ। तसर्थ, मेशिनहरू खोज्ने जुन तातो स्ट्रिमको लागि प्राइम गरिएको छ जस्तो देखिन्छ यदि यो अनलाईन भन्दा धेरै सजिलो कार्य हो।
सबैभन्दा सक्रिय मेशिनहरूमा नजर राख्नुहोस्:
जब तपाईं खेल्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले अन्य खेलाडीहरूले कसरी प्रदर्शन गर्ने हेर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अधिकांश भागका लागि, यदि कसैले विशेष मशीनमा ज्याकपटमा हिर्काउँछ भने, तपाईं तिनीहरूको स्थानमा बसेको बेवास्ता गर्न चाहानुहुन्छ केही समय नभएसम्म। यी मेशिनहरूले तथ्या using्कहरू प्रयोग गरेर काम गर्ने हुनाले उनीहरूको लागि ज्याकपट्स लाई पछाडि हिर्काउने सम्भाव्यता महत्वहीन छ।
जब कोही जीते बिना केही बेर बस्यो, त्यसपछि मेशीन ज्याकपटको लागि प्राइम हुनुपर्छ:
जेकपटमा नहट्नु निश्चित संकेत होइन, तर यो भुइँमा सबै भन्दा राम्रो सम्भावित सूचकहरू मध्ये एक हुन सक्छ। जब कुनै शान्तिमय व्यक्तिले एउटै मेसिनमा दांव दिन्छन्, कसरी तिनीहरू रिलहरू स्क्रोलको रूपमा प्रतिक्रिया दिन्छन् हेर्नुहोस्। यदि उनीहरू निराश देखिन्छन् भने, तपाईं तिनीहरूको पराजयमा रमाउन कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ। उस्तै मशीनमा केही बेट्स राखेर, तपाईं पुरस्कारको साथ टाढा हिंड्ने जो हुन सक्नुहुन्छ। यो पहिलो नजरमा जति डरलाग्दो देखिन्छ, त्यस्तो पुरस्कार कतै कतै नराख्न दिनु कत्ति डरलाग्दो कुरो हो।
स्लट सल्लाह र युक्तिहरू
जतिसक्दो चाँडो तपाईं केही बेट्स राख्न सुरू गर्नुहुन्छ, तपाईं विशेष मेसिन चयन गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ, तपाईं खेल जब आरामदायक महसुस एक पाउनुहुनेछ। अन्यथा, लामो समयावधिको लागि बसेर तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुन सक्छ। मानौं तपाईं एक आदर्श स्थान फेला पार्नुभयो, निम्न सुझावहरूले तपाईंलाई सही दिशामा देखाउनु पर्छ। यस तरिकाले, जबसम्म तपाईं चिप्स समाप्त गर्नुहुन्न, क्यासिनो पक्कै ठूलो घरको भुक्तानीको साथ तपाईंलाई घर पठाउँदछ।
तपाईको जितलाई अधिकतम बनाउनुहोस् ante लाई प्रयोग गरेर
पहिलो र सब भन्दा महत्वपूर्ण, तपाइँको दांवलाई राम्रोसँग आकार दिनुहुन्छ यदि तपाइँ एक सफल स्पिन को स्थिति मा एक उचित पुरस्कार प्राप्त हुनेछ आश्वस्त। यो तपाईको घाटा विरुद्ध हेज जस्तो राम्रो लाग्न सक्छ, यो सबै लाइन मा राख्नु केहि अवसरहरु मा अधिक लाभदायक हुन सक्छ।
यदि तपाई हong्गमस इनामहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसो भए केहि उच्च रोलर मेशिनहरू प्रयोग गर्नुहोस्:
आफ्नो आय अधिकतम गर्न, तपाईले जोखिममा राम्रो सहिष्णुता विकास गर्नुपर्नेछ। एक अभेद्य जोखिम सहिष्णुता बिना, केवल एक क्षण भन्दा बढीको लागि स्लट मेसिनहरू खेल्दा इन्द्रियहरूलाई भारी बनाउन सकिन्छ। मानौं तपाईं पहिलो केहि खर्चहरू चाहानुहुन्छ। त्यसोभए, यदि तपाईको बिरूद्ध विरूद्ध भयो भने तपाईलाई कस्तो लाग्नेछ? केहि उदाहरणहरूमा, यो सुरुमा मानिसहरू हराउन सजिलो छ। यस तरिकाले, उनीहरूले सफलताको पहिचान फेला पारेनन् कि उनीहरूको grasps हराउनमा केहि चिन्ताजनक छ।
अझै पनि, उत्तम हुन्छ यदि तपाईंले मात्र पैसा खर्च गर्नुभयो भने अन्यथा याद हुने छैन:
मानौं तपाईं केहि ठूलो हिटहरू जित्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यसो भएमा, त्यसो भए तपाई धेरै बेरसम्म मूर्ख भएर बस्नु पर्छ। तपाईको जीत सबै रात जम्मा गरेर, यदि तपाई कुरा बिग्रनुभयो भने तपाई बढी दुखाइको लागि हुनुहुनेछ। तपाईं क्यासिनोमा जानु भन्दा पहिले वा अनलाइन क्यासिनो , हामी दुवै नाफा र नोक्साहरूको लागि एक सीमा सेट गर्ने सल्लाह दिन्छौं। जतिसक्दो चाँडो तपाईं ती प्रत्येक मा जानुहुन्छ, यो समय हो तपाईंलाई एक रात कल गर्ने। अन्यथा, तपाइँ पछुताउनुको साथ उठ्नुहुने धेरै सम्भावना हुन्छ।
कसरी अनलाइन स्लटहरू धोखा दिने?
कहिलेकाँही, सुरक्षा शोषणहरू एक अनलाइन क्यासिनोमा फेला पार्न सकिन्छ:
तपाईं उभिनु भएको ठाउँमा निर्भर गर्दै, अनलाइन क्यासिनो धोखाको कठिनाई स्पष्ट-कट मुद्दा जस्तो नहुन सक्छ। एकातिर, यसको मतलव तपाईले राम्रोसँग जित्नु पर्छ। अझै, अर्कोतर्फ, तपाईंले वालेटलाई तपाईंको पछाडिको जेबबाट निकालिएर चिन्ता लिनु पर्दैन, त्यसैले बोल्नुहोस्।
जेसुकै होस्, ज्ञानी ह्याकरहरूले सुरक्षा मुद्दाहरूको दोहन गर्न यो सुन्न सकेका छैनन्। अक्सर, यो सामान्य जनताको ध्यान नदिई जान्छ। जब यी शोषणहरू हुन्छन्, प्रश्नमा क्यासिनोलाई जवाफ दिन लामो समय लाग्दैन। साथै, अफ मौकामा क्यासिनोले उचित प्रतिक्रिया दिँदैन, ग्राहकहरू दृश्यबाट भाग्छन्। यसैले, तपाईले विरलै कसीनो क्यासिनो देख्न पाउनुहुनेछ यदि उनीहरू आफ्ना ग्राहकहरुसँग उभिएनन् भने। मानौं कि केहि समान स्टोर को स्ट्यान्ड stalking देखिन्छ। यदि त्यसो भएमा, तपाईले सामानहरू किन्नको लागि अधिक उपयुक्त स्थान भेट्टाउनुहुनेछ।
सामान्यतया, यी मर्मत गरिनेछ सामान्य जनता सजग हुनु भन्दा पहिले:
अब, मानौं तपाईं लाभको लागि एक पेन्चन्ट को साथ केहि बेइमान नैतिक पाउनु भयो। जब ती जुत्ताहरू तपाईले भर्नुहुन्छ, तपाई कुनै पनि ठाउँमा अवसर फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन उनीहरू भेट्टाउन सक्छन्। त्यसकारण, यस्ता समाचारहरू मुख्य समाचार शीर्षकमा केन्द्रित हुँदैनन्। क्यासिनोको पूर्वाधार सुरक्षा टोली द्वारा समाधान राख्नु भए पछि, तपाईंलाई थाहा पनि थिएन कि यो भयो। फलस्वरूप, दैनिक प्रतिक्रियाहरूमा उही प्रतिक्रियाहरू लम्बास्टि large गर्नाले ठूलो गांठो रकम निम्त्याउँदैन। यसको सट्टामा, तपाइँ एक उन्नत सुरक्षा प्रतिक्रिया सामना गर्नुहुनेछ, तयार र प्रतिक्षा।
जे होस्, गम्भीर परिणामको परिणाम हुन सक्छ यदि तपाईंले यस्तै केही प्रयास गर्नुभयो भने:
जो अझै मूर्ख छन् को लागी एक प्रयास प्रस्तुत गर्न को लागी, तब कठोर कानून बाहेक केहि पनी तपाईलाई यी कानूनहरु पछाडि पर्खन्छ। कुनै श doubt्का बिना, तपाइँ केही राम्रा कडा वाक्यहरूको अधीनमा हुनुहुनेछ, विचार गर्दै हालसालै यस्तो शोषण कसरी भएको थियो। यसबाहेक, तालिका छोडे पछि, यो तपाईको खल्तीमा अनुहार जोड्ने सिक्काका लागि राम्रो हुन्थ्यो राम्रो गरी जित्नु पर्छ।
कसरी स्लट मेसिन धोका दिने?
त्यसकारण हामीले यस विषयमा लामो समय सम्म कुरा गरिसकेका छौं, कुनै पछाडि श doubts्का गरौं जुन तपाईको दिमागमा छ। यदि तपाईं केवल अनलाइन क्यासिनोहरूको ’boutमा सोच्नुहुन्छ भने, यसले कुनै व्यक्ति स्थापनामा उपस्थित हुन धेरै अर्थ राख्दैन। जे होस्, ईंट र मोर्टार क्यासिनोले ग्राहकहरूको स्थिर प्रवाह कायम गर्दै छ। चोरी गर्न सजिलो अनलाइन दृष्टिकोण बिना, व्यक्तिले समान प्लॉटहरू व्यक्तिगत रूपमा अनुसरण गर्न कसरी सजिलो हुन्छ? यदि तपाईंले हामीलाई सोध्नु भयो भने, यो समग्रमा मिश्रित झोला हो। एकातिर, यस्तो लाग्दैन कि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका प्रविधिहरू छन्, हैकर्स द्वारा नियोजित, जुन भौतिक मेशिनमा उपयोगी हुन सक्छ। यद्यपि तिनीहरू डिजिटल वातावरणमा असुविधाजनक छन्, त्यस्तै व्यक्तिमा व्यक्तिहरूको कुरा गर्न सकिदैन।
समग्रमा, भौतिक स्लट मेसिनहरू ह्याकरहरूमा नभई अभेद्य छन्:
यी कारणहरूको लागि, निर्माताहरूले अत्यधिक टिकाऊ स्लट मेसिनहरू उत्पादन गर्छन्। शंकास्पद कलाकारहरूलाई अनअर्डर्ड मुनाफा लिनबाट रोक्न, तिनीहरू लगभग अभेद्य छन्। यसैले, मानिसहरूले प्रायः त्यस्तो नजिकको क्षेत्रमा भइरहेको घटनाको ’bout सुन्न प्रायजसो हुँदैन। यदि त्यस्तै केहि हुने भएको भए, त्यसो भए यो बेलुका सबै रिपोर्टि over भरि हुन्छ। केवल एक क्षणमा, १०० माईलको दायरामा सबैजना कहानीमा फर्किन्छन्। यसबाहेक, भोलिपल्ट बिहान घाम लाग्ने बित्तिकै, क्यासिनो स्टाफले थप सुरक्षा उपायहरू राखिसकेको हुनेछ।
ती पनी जो साँच्चिकै प्रतिभाशाली छन् उनीहरुलाई क्र्याक गर्न संघर्ष गर्नुहोस्:
मानौं तपाईं महत्वाकांक्षा संग लापरवाह हुनुहुन्थ्यो, जसले तपाईंलाई अकथनीय अन्तको लागि प्रेरित गर्‍यो। यदि त्यस्तो भएको भए, सायद तपाईं सायद साप्ताहिक नोटको वस्तुहरूको शीर्ष स्थानमा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। भाग्यवस, हामीले यस्तो महसुस गर्यौं कि तपाई त्यस्तो ईमान्दारक महत्वाकांक्षाहरूलाई पूरा गर्नेहरू भन्दा धेरै इमान्दार व्यक्ति हुनुहुन्छ। निस्सन्देह, क्यासिनोहरू जसले उनीहरूको चौडाई हलहरूमा आर्टवर्कको साथ लाइनमा भाग लिन्छन् तिनीहरूको समर्थन बिना केही पनि गर्दैनन्। यसको शीर्षमा, तपाईंले अनुमान गर्नुपर्‍यो कि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले पहिलो स्थानमा मेशिनहरू सिर्जना गर्न अनगिन्ती घण्टा काम गरे। जब सम्म तपाईं तिनीहरूलाई बिना जान चाहानुहुन्छ, हामी नियमहरूमा टाँसिरहन सल्लाह दिन्छौं ताकि उनीहरू नाफाको लागि कार्य गर्न जारी राख्न सक्दछन्। तिनीहरूको हार्डवेयर बिना, कोही पनि क्यासिनोको रोमाञ्चक आनन्द लिन पाउदैन, यो अनलाइन हो वा व्यक्तिगत रूपमा।
यसका साथै, धोका दिन कोशिश गर्नु बराबर हुनेछ यदि तपाईं सफल हुनुभयो भने
यो सम्भव छैन तपाईलाई एक व्यक्ति-बाट मेसिनमा खेल्दा धोखा। जे होस्, यदि यो सम्भव थियो भने, तब सफलतापूर्वक धोखाधडी चोरीको बराबर हुनेछ जब यो सही तल आउँदछ। अन्तत :, क्यासिनोहरू सबै नैतिक संस्था होइनन्, उनीहरूको भित्तामा काम गर्ने मानिसहरू दिनको अन्त्यमा मानव हुन्। सबैजना आफ्नो मनपर्ने शौकको मजा लिन जारी राख्नको लागि, तपाईं बाँकीमा यसलाई बर्बाद गर्नु हुँदैन। नियमहरू पालना गर्दा, तपाईसँग एक उत्तम समय मात्र हुन सक्छ, तर सबैजना लाई पनी।